ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ဦးဝင်းတင်နဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခန်း”
Singapore calls for Aung San Suu Kyi's release:
အမည်မသိရေ….. အခုလို သတင်းလာပို့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စင်္ကာပူအစိုးရအနေနဲ့ အခုကိစ္စမှာ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းမပြုလျှင်တောင်မှ ကျနော့်တို့ကတော့ နားလည်ပေးရမှာပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စင်္ကာပူအစိုးရကိုယ်တိုင်က သူတို့ဆီက အတိုက်အခံနိုင်ငံရေးသမားများနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို အခုလိုပဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ရမယ်ရှာပြီး (ဥပဒေနဲ့ မညီဘဲ)အဓမ္မထောင်ချနေကျ မဟုတ်လား။ သူတို့က နအဖလုပ်ရပ်ကို ရှုံ့ချတယ်ဆိုရင် ဘိန်းစားချင်းတမူးပိုရှူနေပြန်ပါပြီလို့ နအဖက ပြောစရာဖြစ်ပေမပေါ့ခင်ဗျာ။ ဥပမာပေးရရင် ရောဘတ်မူဂါဘီအစိုးရကို နအဖက ရှုံ့ချသလိုမျိုး ဖြစ်နေတော့မပေါ့။
မဖတ်တော့ကောဘာဖြစ်သလဲငပေါရာ။ ငါတကောကောတတ်လွန်းတဲ့ မင်းလိုကောင်ကညွှန်းလို.ကိုမဖတ်ဖူးကွာ။
စင်္ကာပူ အစိုးရဟာ နှိုင်းပြောရရင် မိန်းမဆို ပြည့်တန်ဆာမ သာသာပဲ။
လူရှေ့သူရှေ့ကျ သူတော်ကောင်း ဟန်ဆောင်ပြီး ကွယ်ရာကျ ISDက သူ့အမဲလိုက်ခွေးတွေကို ဒီင်္ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စင်္ကာပူမှာ ရွှေမြန်မာတွေ ဘာများ လှုပ်ရှားကြမလဲဆိုပြီး အနံ့ခံခိုင်းရတာ အမော ...
၁၉၈၉ ဒေါ်စု ကိုထိမ်းသိမ်းလိုက် ကတဲကအော်နေကြ
တာ အခုဆို အော်ကြက်သက်တမ်း အနှစ် ၂၀ ပြည်.
ခါနီးပါပီ။အော်တော.ဘာတွေ ဖြစ်လာလဲ ဆိုတော.
တယ်။အအော် မတတ်တဲ. လူတချို. လဲ တောရ
ဆောက်တည် လိုက်ရတယ်။ န၀တ နအဖ ကတော.
လေချွန် မပျက်ပါပဲ။အော်နှိုင်လှ ခဏပေါ.။
ဗမာ လူမျိုးခြင်းပဲ နပ်ပီးသား။ ကောက်ရိုးမီး
ခဏ ဆိုငြိမ်းသွားတာပါပဲ ။ ၂၀၀၃ ကဆို
ဒီ.ထက်တောင် ပိုပီး အသံကျယ်သေးတယ်။
လူထု ကလဲ ဆန် နဲ. ဒေါ်စု ဘာကပိုပီး
အခုလဲ အော်ကြပြန်ပီ။ ထုံးစံအတိုင်းပါပဲ
ကောက်ရိုးမီး ခဏဆို အလိုလို ငြိမ်းသွားမှာပါ။
အဲဒီလို ပီးတော့လဲပီးသွားတာပဲဆိုတဲ့ ကြောင်ချေးတွေရယ်.. ဘေးထိုင်ဘုပြောတွေရယ်... တိုင်းပြည်နိုင်ငံနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး သိက္ခာကျ အရှက်နည်းရအောင် လုပ်နေကြတဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးမင်းတွေရယ်.. အော်...ဒါဆို လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေရမှာလားကွယ်.. အဲလိုပြောရင် မဟုတ်လို့လား... :(